I-Leopard - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Leopard [Panthera pardus]
Ingwe iphumla emthini. Iipopu zinamabala amnyama ahlelwe kwi-rosettes, eyahluke kwimvelaphi yegolide ephuzi. Zinamabala amnyama athile kumalungu abo kunye nentloko. Imisila yabo imhlophe ikhonkxwe ngaphantsi. Le Pati inkulu kwaye isakhiwe ngaphezu kweCetta. Intloko kunye nobude bomzimba ngu-1.6 - 2.1 m, kwaye umsila u-0.68-1.1 m. Amabhinqa amancinci kwaye anesisindo esingu-17-60 Kg kanti iindoda zilinganisela i-20-90 Kg. Ukuphakama kwawo ukuma ku-700-800 mm kumahlombe. Esi sondlo sebusuku sinesibini esibalulekileyo kwiikati ezinkulu zaseAfrika.
Ukutya okuhlukahlukeneyo kuqinisekisa ukuba i-Leopard iyakwazi ukulungelelanisa nantoni na. Nangona ii Leopards zidla ngokutya kwi-antelopes ephakathi neyincinci, ziye zaziwa ukuba zondla kwi-Hyrax, Baboon, Fox, iintlanzi kunye nezilwanyana ezinwabuzelayo. Kukho neengxelo zee-Leopards ezihlala ekudleni kwezinambuzane kunye neentonga ngexesha lobunqongophala. IiLopards zilungelelanise kangangokuthi ziye zaziwa ukuba zisinde ngaphandle kweedolophu nakwiidolophana.
Jonga ngeengwe zasendle. Abantwana bazalwa naliphi na ixesha lonyaka njengoko bengabalimi abangabikho bexesha. Iibhokhwe ze-Leopard zizalwe emva kwexesha lokunyuka kweenyanga ezintathu neyesigamu kunye neesifazana zivame ukuzala ezimbini okanye ezintathu kwiibhokhwe ezifihlakeleyo zemingxuma yemvelo okanye isiqithi. Unina we-Leopard unakekele kakhulu ukufihla iibhubhu kwizilwanyana ezinjengeengonyama, i-Cheetah ne-Hyena, eziza kuzama ngethuba lokwenza ukutya okulula. Ii-cubs zihlala kunye nonina okungenani ngonyaka, ngeliphi ixesha zifunda iindlela zasendle kunye nendlela yokuphila zodwa.
Balala befihla emini baze bazingele ebusuku, nangona kwezinye iindawo ukuzingela ngentsuku kuqhelekileyo. Inkqubo yabo yokuzingela iquka ukuhamba kunye nokuhlambalaza, ukubulala amaxhoba amakhulu ngokubamba umlenze entanyeni ephazamisayo. Izilwanyana ezincinci zinyama zibulawa ngenxa yokuluma emqaleni entanyeni esivame ukukhupha umgca wesipelini. Baqhenqa inwele emzimbeni ngaphambi kokuba baqale ukondla kwiindawo ezincinci zomzimba.
Iintsali zezinto zokubamba kunye nesisu ziya kugutywa ngotshati nangesihlabathi. Baya kukhwela i-agile kwaye xa kukho ukhuphiswano olusuka kwezinye izidumbu i-carcass iya kugcinwa ngaphandle kokufikelela kwimfoloko yomthi omkhulu. Amadoda avikela amacandelo amakhulu athatha indawo yamabini okanye abathathu abafazi. Abasetyhini bavikela indawo yabo ngokumalunga namanye amabhinqa.
Ingwe igqithwe emthini. I-Leopard iyakhathazela imeko yemozulu eguqukayo kwaye ivela kwiindawo ezininzi zokuhlala. Kufunyanwe kwimimandla yonxweme ukuya kwiindawo eziphakamileyo ze-2000 m ngaphezu kwinqanaba lolwandle emahlathini, entlango, enkangala, entlango, ezintabeni, ezintabeni kunye nasezindaweni zamatye. Abaxhomekeke kumanzi angaphezulu. Le nkosi yobuqili idinga uhlobo oluthile lokukhupha njengesiqithi okanye amawa. Nangona zancipha ngamanani ngaphezu kweminyaka, iiLopards zifunyenwe kwiintaba zasendle kunye neentaba ezinqamlekileyo kulo lonke elaseMzantsi Afrika, ngaphandle kweendawo eziphambili ezikulima ngaphakathi.
Imephu apho bafumana khona ngokuqhelekileyo. Iingophe ziyakwazi ukujongwa kwindawo yazo yendalo kwindawo ezininzi zokugcina umdlalo kulo lonke elaseMzantsi Afrika. Ezi ziquka i-Kruger National Park, eMpumalanga nasePilanesberg National Park kwiPhondo leNtshona-ntshona. Abantu abahlala kwiiLebhu eziPhandle bangasifumana kwiDanga laseDrakensberg kunye neendawo ezininzi zokugcina iimidlalo kunye neefama kulo lonke elaseMzantsi Afrika.